Kenya oo ka cabsi qabta weerarro argagixiso | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo ka cabsi qabta weerarro argagixiso
Bruno Shioso, wuxuu xusay Kenya ay xoojisay ammaanka xudduudka, isla markaana ay hubisay dhammaan dadaallada looga hortagayo weerarrada ka dhaca dalkaas.
NAIROBI, Kenya – Dalka Kenya ayaa galay feejignaan amni oo dheeraad ah, kadib markii weerarro qaraxyo ah ay dhawaan gilgileen dalka xuduudda kala leh dhanka bari ee Uganda, kaas oo Isniintii la soo dhaafay ay laba qof ku naf-waayeen dhowr kalana ku dhaawacmeen, kadib qarax ka dhacay degmada Mpigi ee bartamaha dalkaas.
Afhayeenka booliiska Kenya, Bruno Shioso, ayaa sheegay in Xukuumadda Nairobi ay qaadday tallaabooyin dhowr ah oo looga hortagayo in dhacdo noocaas oo kale ah ay ka dhacdo gudaha Kenya.
Bruno Shioso, wuxuu xusay in Kenya ay xoojisay ammaanka xudduudka, isla markaana ay hubisay dhammaan dadaallada looga hortagayo weerarrada ka dhaca dalkaas.
Kenya, ayaa wajaheysay weerarro argagaxiso oo uga imaanayay Kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo fadhigoodu yahay Soomaaliya, tan iyo markii Nairobi billowday weerarrada milateri ee ka dhanka ah kooxda xiriirka la leh Al-qaacida, bishii Oktoobar 2011-kii, kaas oo loogu magacdaray “Howlgalka Linda Nchi,”.
Ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan milateriga Kenya ayaa lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay qarax todobaadkii hore ka dhacay gobolka Lamu oo u dhow soohdinta Soomaaliya.